Maxaa Cusub – Page 11 – Shabakadda Amiirnuur
Dhegeyso Maxkamad Xukun Gacan goyn ah ku riday Nin Dukaan jabsaday
Maxkmada Islaamiga ahe e Gobalka Shabeelaha hoose ayaa Gacanta Midig a jirtay Nin Jabasaday Dukaan ku yaalla Deegaanka tirsan Gobalkaas Isla Markaana ka qaatay lacag ka badan Shan Milyan oo Shilin Soomaali ah iyo laba moobeyl. Qaadiga Maxmakadda ayaa sheegay in Ninki Dukaanka lahaa soo dacweeyay ee kii Dukaanka jabsaday […]
DAAWO; Filimka “Farmaajo: Ballanqaadyo Been Ah Iyo Himilo Halaanhal Ah.” Qaybtii 3-Aad
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa soo saartay Xalqada Sadaxaad ee Filim Ciwaankiisu yahay Farmaajo Balan qaadyo Been ah iyo Himilo Halaanhal ah. Qaybtaan waxaa si weyn loogu faaqidayaa Boobka Khayraadka Soomaaliya lagu hayo iyo sida Shisheeyuhu ugu soo guntaday Gumeysi Dhinaca Dhaqaalaha ah. waxaa ka soo Muuqanaya Shisheeyaha iyo Siyaasiyiin ka […]